I-China yokufihla i-RPET Bag iipesenti ezingama-100 eziRisayikilishwe ezikwisikhwama seMidlalo esiSebenzayo esisebenzayo Isikhwama esiPhathekayo seFashoni somthumeli sefektri kunye nabathengisi | Utshintsho
Ukufihla i-RPET Bag iipesenti ezingama-100 eziRisayikilishwe kwizixhobo zePokotho zeMidlalo ebalekayo yokuthwala ibhegi ephathekayo yeMfashini epholileyo ye-unisex
Le patheni ye-RPET ifihliwe ekhangeleka intle njengejoni.Ukushicilelwa kweCamouflage kwenziwe ibhegi ibe yinto epholileyo kwaye ipholile.
Izinto: RPET Ubunzima:
Ubukhulu: 36.5L * 9.5W * 17Hcm Ukuvalwa: uziphu
Isicelo: ukuthenga, ukusebenza, yonke imihla
Uncedo: Ukufihla, ukuHamba, iFashoni, ukusebenza, ukubola
Ukuseka ngo-2017, Changlin isityalo isebe Jiafeng Plastic Products CO., LTD eye iminyaka engaphezu kwama-20 amava iingxowa making.This ibhegi RPET 100% ivuseleleke.Izinto akukho lula ukufumana wet.Besides, ukuba luncedo kakhulu Ubomi bemihla ngemihla kunye nefashoni yamadoda nabafazi.
Ukujonga ecaleni kweMicrosoft
Isitayile sokuzifihla sonyusa imeko yokuphola. Ngaphakathi ebhegini, kukho omnye umaleko omncinci onokuvalwa kwe-zipper ukubeka ikhadi lebhanki elibalulekileyo, njl.njl. Iluncedo kakhulu kwaye uyilo lulungile.
Njengobungakanani, banele abantu xa beqhuba kwaye bethenga. Ubungakanani bayo yi-36.5L * 9.5W * 17Hcm enokubeka ifowuni yakho, emazantsi amanzi, izicwili, njl.
Intloko ezimbini zokutsala zilungele abantu abanemikhwa eyahlukileyo.
Olu luyilo lulunge kakhulu kubantu abaneemilo ezahlukeneyo Kulula ukuluqhuba kwaye ulususe.
Inkampani yethu inobungcali kwiingxowa ezivelisayo. Ngomoya "wokuzinikela, ukuvelisa izinto ezintsha, ukusebenzisana, ukusebenza nzima" kunye nesitayile somsebenzi wokuba "ngocoselelo, uqeqesho, ukunxibelelana, ukugqwesa", bonke abasebenzi babonelela abathengi abadala nabatsha nge Ezona mveliso zibalaseleyo kunye nenkonzo Uya kulonwabela elona qela lobuchwephesha ukukunceda!
Egqithileyo I-RPET ngokuprintwa okupheleleyo kokuthwala ibhegi yentyatyambo yesitampu seplastiki ephathekayo
Okulandelayo: Intlanzi ye-RPET ibhegi eyi-100% yokuphinda isetyenziswe kwakhona ePokothweni yeNdawo yezeMidlalo yokuGijimisa ibhegi ephathekayo yeFashoni yomthunywa webhegi ye-unisex
Ihowuliseyili DB ingxowa izithambiso ...
Ihowuliseyili ipholiyesta Bag Ukuphathwa Handle Ukuvalwa C ...
Eco-friendly kwakhona EVA 3D eyelets izinto c ...
Cotton Canvas Bag Travel Makeup izithambiso Bag Wi ...
Umqhaphu wengxowa yeevenkile zokuthenga